क्यान्भामा YouTube ब्यानर कसरी बनाउने, चरण-चरण | क्रिएटिव अनलाइन
एक YouTube ब्यानर च्यानलको कभर छवि हो। यो अक्सर शीर्षकमा जानकारी प्रदान गर्न, ध्यान आकर्षण गर्न र श्रोताहरूलाई तपाईंलाई सजिलै पहिचान गर्न प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए यो महत्वपूर्ण छ कि यो प्रतिनिधि हो तपाइँ च्यानलमा के गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पुग्नेहरूलाई तिनीहरूले भिडियोमा के फेला पार्दछ भनेर जान्न मद्दत गर्नुहोस्। यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई सिकाउन जाँदैछु कि कसरी कन्भामा युट्युब ब्यानर सिर्जना गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग र कुनै प्रोग्राम स्थापना नगरीकन।
1 YouTube ब्यानर आयाम
2 क्यान्भामा स्रोतहरू अपलोड गर्नुहोस्
3 ब्यानर डिजाइन
3.1 पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्
3.2 फोटो थप्नुहोस् वा क्यान्भाको निःशुल्क स्रोतहरूको फाइदा लिनुहोस्
3.3 पाठ थप्नुहोस् र तत्वहरू पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्
3.4 यो यूट्यूबमा कस्तो देखिन्छ जाँच गर्नुहोस्
YouTube ब्यानर आयाम
यसलाई पिक्सिलेटेड हुनबाट रोक्नको लागि, तपाईंले फाईल 2560 x 1440 px को आकार दिनु पर्छ। तपाईंले यी आयामहरू याद गर्नुपर्दैन यदि तपाईं चाहानु हुन्न भने, यदि यसको सट्टामा तपाईं खोजी इन्जिनमा जानुहोस् र लेख्नुहोस् «YouTube कभर» तपाईं पहुँच गर्नुहुनेछ टेम्पलेट्स डिजाईन सुरु गर्न तपाइँको ब्यानर
तपाईं पनि जान सक्नुहुन्छ बैजनी बटन माथिको दायाँ कुनामा रहेको छ "एक डिजाइन सिर्जना गर्नुहोस्"। जब तपाईं क्लिक गर्नुहुन्छ, एउटा सानो विन्डो खुल्नेछ जुन तपाईंले आयामहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
क्यान्भामा स्रोतहरू अपलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो ब्यानर सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको च्यानलको लागि डिजाइन गरिएको दृश्य पहिचान हुन सक्छ। तपाईंसँग भएको संसाधनहरू अपलोड गर्नुहोस् (लोगोहरू, छविहरू, र ... ...) क्यान्भा डिजाइन गर्न सुरु गर्नु अघि। जे होस् तपाईंले तिनीहरूलाई ब्यानरमा प्रयोग गर्नुहुन्न तिनीहरू प्रेरणाको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्।
उदाहरण को लागी, लोगो को छवि को कभर फोटो मा देखा पर्न जरूरी छैन। यदि तपाईं यसलाई पहिले नै तपाईंको प्रोफाइल तस्वीरमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तर उदाहरण को लागी, म यसको प्रयोग गरीएको छु र extहरू निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई बाँकी तत्त्वहरूमा लागू गर्नुहोस् मेरो ब्यानर को। यदि तपाईं जानुहोस् रंग मेनू, पृष्ठभूमिमा थिचेर र वर्गमा क्लिक गरेर माथिको बायाँ कुनामा, तपाईं त्यो देख्नुहुनेछ क्यान्भाले स्वचालित रूपमा फोटोहरूबाट रंग प्यालेट निकाल्दछ ताकि तपाईं तिनीहरूलाई जहाँ चाहानुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
क्यान्भामा स्रोतहरू अपलोड गर्न, तपाईं प्यानलमा अवस्थित क्लाउडमा जानु पर्छ बाँयामा। सक्छ फाईल तान्नुहोस् तपाईं त्यहाँ चाहनुहुन्छ वा क्लिक गर्नुहोस् "फाइलहरू अपलोड गर्नुहोस्" र छविहरू तपाईंको उपकरणबाट वा कुनै पनि प्लेटफर्मबाट देखा पर्ने अपलोड गर्नुहोस्। जब तपाईं सबै अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईं सिर्जना सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ!
पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्। म लोगोको पहेंलो प्रयोग गर्न जाँदैछु। पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्न, केवल यसमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिको बाँया आयतमा जानुहोस्। तपाईं नयाँ र color सेट गर्न सक्नुहुनेछ, प्लस चिन्ह दिएर वा प्यालेटबाट र useहरू प्रयोग गर्नुहोस् (मेरो केसमा जस्तो)।
फोटो थप्नुहोस् वा क्यान्भाको निःशुल्क स्रोतहरूको फाइदा लिनुहोस्
चित्रहरू ध्यान खिच्नमा धेरै सहयोगी हुन्छन्। मैले पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ फोटो अपलोड गरेको छु, म यसलाई केन्द्रमा राख्छु र कालो र सेतो फिल्टर लागू गर्दछौं ताकि यसलाई हाम्रो र to्गमा अझ राम्रो बनाउन सकियोस्। छविमा क्लिक गर्नुहोस्, र शीर्ष प्यानलमा, «फिल्टर on मा क्लिक गर्नुहोस् र कालो र सेतोमा एक लगाउनुहोस्। तपाईं जान सक्नुहुन्छ Panel समायोजन », उही प्यानलमा, र केहि समायोजन गर्नुहोस् यसलाई तपाईंको मनपर्ने बनाउनको लागि, मैले केही अलि बढाएको छु
यदि तपाईं आफ्नो फोटो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, सँधै तपाईं क्यान्भाको निःशुल्क स्रोतहरूमा जान सक्नुहुन्छ। साइड प्यानलमा, आईटम अन्तर्गत, तपाईंसँग पहुँच छ सुपर रोचक चित्रहरु जसले जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ नहरमाथि। तिनीहरूलाई फिल्टर गर्न खोज ईन्जिन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई अभिमुखिकरण मनपर्दैन भने, सँधै तपाईं यसलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर र माथिल्लो प्यानलमा घुमाउन।
फोटो वा चित्र जोड्नुहोस्, नोट गर्नुहोस् सबै उपकरणहरूमा दृश्यता टेम्पलेटको केन्द्रीय भागमा मात्र सुनिश्चित गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि कम्तिमा कम्प्युटरमा यो राम्रो देखिन्छ, त्यसैले तपाईंले माथिको छविमा डिलिमेटेड क्षेत्रका एलिमेन्टहरू राख्नुपर्दछ र महत्त्वपूर्ण चीजलाई सकेसम्म केन्द्रको नजिक छोड्नुहोस्।
पाठ थप्नुहोस् र तत्वहरू पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्
छवि राखे पछि, हामी गर्नेछौं केही पाठ थप गर्नुहोस् यसले च्यानलको सामग्रीको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। दायाँपट्टि म विषय लेख्ने छु र बायाँ म हाइलाइट गर्छु कि हामी ट्यूटोरियल गर्छौं। तपाईं आकार प्रयोग गरेर अधिक आकर्षक पाठहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंले आयत बनाउनु भयो भने, तपाईं माथिको पाठ राख्नुहुन्छ र पृष्ठभूमि रंग दिनुहुन्छ, तपाईं भ्रम बनाउनु हुन्छ कि यो फारममा प्वाल हो।
तपाईं आकार र फन्ट माथिल्लो प्यानलमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ (मैले कालो फाइल प्रयोग गरें र लोगो प्यालेटको र the्ग प्रयोग गर्न जारी राखें)। त्यो याद गर्नुहोस् तपाईं तत्वहरूलाई पछिल्तिर वा अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ «स्थिति move ट्याबमा। समाप्त गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि सबै कुरा राम्रोसँग लाइनमा छ। को 'align' उपकरण यो स्थिति ट्याबमा पनि उपलब्ध छ।
यो यूट्यूबमा कस्तो देखिन्छ जाँच गर्नुहोस्
एक पटक तपाईं तयार हुनुहुन्छ, यसलाई jpg ढाँचामा डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंको यूट्यूब च्यानलमा प्रयास गर्नुहोस्। यो विभिन्न उपकरणहरूमा कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। क्यान्भामा तपाईले ब्यानर कसरी सिर्जना गर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ, उपकरण एकदम उपयोगी छ र यसलाई अन्य कामहरूमा प्रयोग गर्न लायक छ, जस्तै कि प्रस्तुतिकरण डिजाइन.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » क्यान्भामा कसरी YouTube ब्यानर सिर्जना गर्ने, चरण-चरण
मूल प्रस्तुतीकरणहरू बनाउनको लागि कार्यक्रमहरू